Yuu noqon doonaa ra'iisal wasaaraha xiga ee Itoobiya? - BBC News Somali
Yuu noqon doonaa ra'iisal wasaaraha xiga ee Itoobiya?
Image caption Waxaa laga yaaba in dowladdu ay bandow soo rogto
Ra'iisal wasaarihii ugu horeeyey ee dalka Itoobiya Hailemariam Degalegn, ayaa si lama filaan isu casiley. Wuxu talada dalkaasi hayey shantii sano ee lasoo dhaafey.
Image caption Muddaaharaadyo ayaa ka socday Itoobiya saddexdii sano ee la soo dhaafay
In laga fal celiyo is casilaaddii ra'iisal wasaraha.
Boqolaal maxaabiis ah oo laga sii daayay xabsiga dhexe ee Jigjiga
Bishii January, mas'uuliyiinta ayaa kasii daayay xabsiyada 3,000 oo maxaabiisa, kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin iyo wariyeyaal, waxaa qeyb ka ahaa hoggaamiyeyaal mucaarada sida Bekele Gerba, Merera Gudina iyo Andualem Arage.
Image caption Hogaamiyaha mucaaradka Merera Gudina ayaa ah mas'uulkii ugu sareeyay ee illaa iyo hadda la soo daayey
Muxuu ra'iisal wasaaruhu isu casiley?
Image caption Hailemariam Desalegn ayaa ahaa ra'iisalwasaaraha itoobiya tan iyo 2012
Itoobiya waligeed muusan hoggaaminin ra'iisal wasaare Oromo ah, inkastoo ay yihiin qowmiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya.
Amxaara - 27%
Soomaali - 6.2%
Kuwa kale - 26.3%
Yaa noqon doona ra'iisal wasaaraha cusub ee Itoobiya?
Lemmy Megersa, oo ah madaxa is maamulka Oromada, sidoo kalana hoggaamiya xisbiga OPDO, wuxuu kamid yahay dadka ugu cad cad ee laga yaabo inuu noqdo ra'iisal wasaare.
Kooxaha mucaaradka iyo kuwa u ololeeya xuquuqda aadanaha, ayaa ka doonaya isbaheysiga EPRDF awoodaha badan ee ay gacanta iyagu kuheystaan qaarkood iney wareejiyaan, una oggolaadaan hey'addaha kala duwan iney si xor ah u shaqeeyaan, oo aan juujuub iyo caga lugleyn lagu sameyn.